DVD shawladda Audio
> Resource > Video > Sidee Waraaqda Audio From DVD A
Waxaan u malaynayay ma ahan markii ugu horeysay ee aan maqlay qaar ka mid ah heesaha ama soundtrack on DVDs iyo dareensan sida aan doonayaa in aad u! Si kastaba ha ahaatee, waa adag tahay in ay helaan software habboon in shaqo in nagu samayn karaa. Iska daaya diinta audio soo galeen file regelingen ah. Si kastaba ha ahaatee, ku Wondershare Video Converter Ultimate samayn karto oo dhan in aad u!
Dhab ahaantii, waxa ay samayn karaan wax badan oo dheeraad ah, sida abuurista gurmad ah ee DVD aad, badbaadin gasho file image ISO, waxaa loogu badalo u playbacks on kombuyuutarrada gacanta iyo soo bixi online videos. Waxa kale oo aad edit karaa faylasha video iyo sidoo kale qabsadaan goobaha ay sida ay video baahidaada. Waa DVD shawladda ugu fiican audio aad u!
Talaabada 1: geliyaan DVD aad
Waxaad doonaa si toos ah si toos ah u badalo 's menu ugu weyn marka aad bilaabay Video Converter Ultimate ah. Sidaa darteed, fadlan hubi in aad naftaada navigated xagga daaqaddii Gubashada ka hor inta aad geliyaan DVD aad. Haddii DVD videos aad ku kaydsan yihiin in softcopies, waxaad samayn kartaa dar Faylal ay Author deegaanka buugga fayl ama kaydinta dibadda in ay ku xirnayn. Haddii kale, riix kaliya DVD Load in aad is geliso aad DVD disc jirka.
Talaabada 2: Edit DVD aad (optional)
Waxaa jira ah Edit icon si aad uploaded video files ama DVDs in aad u horseedi doonta shaashada tafatir sida hoose. Haddii aad u baahan tahay oo kaliya inay soo saaro dherer gaar ah oo music ama soundtrack ka DVD ah, si fudud u isticmaali muujinta calaamadeysanayaan goo in editor dhisay-in. In nooca ugu dambeeya ee Video Converter Ultimate ah, aad haatan dooran kartaa in mid uun ay tirtirto ama sii qaybo la soo xulay ay ku daray calamado dhowr ah isku mar.
Talaabada 3: Waraaqda iyo badalo DVD maqal ah si file regelingen
Ka dib markii in, wuxuu kuu qaadi karaa si loogu badalo DVD maqal ah soo bixiyay in la file regelingen ah sida aad u rajeeyay. Kale oo ka duwan qaabka file regelingen ah, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad u badbaadin sida MP3, M4A ama qaabab kale file maqal ah in ay taageero u Converter Video ah Ultimate. Hadda waxaad riixi kartaa ka badalo badhanka! Si fudud u soo ceshano aad file maqal ah la gediyay adigoo gujinaya fariin pop-up in uu ugu qoran shaashada mar way dhamaatay ah.
Feature kale: Download ka online
Tag Download suuqa kala 's, riix URL + dar ka dibna nuqul ka-iyo-paste URL ka video ee sanduuqa pop-up ah (khaanadda URL ee). File ayaa bilaabi doonaan in ay soo bixi marka aad riixi OK . Markaas, guji Dhameyso on navigation Murayaad aad bidix ee gacanta ee dooro Beddelaan inay ka icon fallaadhii ku fog-xaq file ka soo dejisan. Waxa aad ku celin kartaa Tallaabada 1 ilaa 3 sida kor ku xusan si loogu badalo files si ay wax soo saarka qaab doorbidayso aad.
DVR-MS Converter: Beddelaan DVR-MS in qaab kasta, oo ay ku jiraan DVD